Hindise sharciyeedyada lagu eegi doono kalfadhiga Baarlamanka oo ay ku jiraan kuwo xasaasi ah (Muqdisho & Somaliland oo ka mid ah) | Hadalsame Media
Home Wararka Hindise sharciyeedyada lagu eegi doono kalfadhiga Baarlamanka oo ay ku jiraan kuwo...
Hindise sharciyeedyada lagu eegi doono kalfadhiga Baarlamanka oo ay ku jiraan kuwo xasaasi ah (Muqdisho & Somaliland oo ka mid ah)
Marka uu Madaxwaynuhu kalfadhiga furo waxaa kaddib hor yaalla hindise sharciyeedyo xasaasi ah kuwaasoo ay ka mid yihiin; sharciga xisbiyada siyaasadda iyo hab-raaca doorashada xubnaha metelaya Somaliland.
Waxaa kale oo kale oo ka mid ah arrinta metelaadda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, qoondada haweenka ee Baarlamanka iyo saarista doorasho degaannada laga codayn doono.
Waxaa jira hindise sharciyeed ku saabsan meel ka dhacyada jinsiga, kaasoo aan la hubin inuu geli doono qodobbada la qaadi doono iyo in kale, sidoo horayba loosii ballan qaaday.
Previous articleRW Abiy Ahmed oo ku dhaqaaqay fal uu ku ceeboobey & laba-wejiilayn muujinaya (Maxaa dhacay?)
Next article”Haddii aad Soomaali tahay markiiba waa lagu nacayaa!” – Dukaan ku yaalla Minneapolis oo xaalad adag wajahaya & ceebo kusoo baxay!